ICasa Villa Saús, iparadesi yokwenyani. - I-Airbnb
ICasa Villa Saús, iparadesi yokwenyani.
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguBorja
Wamkelekile kwi "Villa Saús" indlu eqhelekileyo yaseAsturian eyakhiwe ngukhokho wam ekupheleni kwenkulungwane ye-18. Izimele ngokupheleleyo, inepatio yabucala yangaphandle enemibono enomtsalane yehlathi kodwa ukusuka apho unokubona khona iSierra del Aramo kumgama, kubandakanywa nencopho yeMeya yasePeña, ukwandiswa kwePicos de Europa.
Ivenkile ekufutshane yimizuzu emi-5 ngemoto (i-El Economato, iCarbayin Alto) kunye nezixeko ezinjenge-Oviedo okanye i-Gijón ziyimizuzu engama-30 ngemoto.
Indlu inemigangatho emibini, kowokuqala uya kufumana iholo ebanzi, ikhitshi / igumbi lokuhlala, igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo. Ukunyuka kwezitepsi uya kufikelela kumgangatho wesibini apho unokonwabela indawo yokufunda kwaye ufikelele kwipaseji entle apho uya konwabela iimbono ezintle kwaye kukho indlu yangasese. Indlu inepatio enkulu yangaphandle kunye nesithuba esisecaleni kwendlu. Ngaphandle kwamathandabuzo indawo enayo, apho izandi kuphela oya kuva eziya kuba ziintaka okanye iinkomo, kwaye indawo yabucala yangaphandle bubunewunewu bokunandipha umtsalane noxolo olunikezwa yile ndawo yokuhlala.
"I-Casa Villa Saús" ifumaneka kwibhunga lase-Asturian laseSiero (ephakathi kwe-Asturias), okwenza kube lula kakhulu ukuhamba ngokukhawuleza kuyo nayiphi na indawo kummandla. Kwakuyintsimi yobuvulindlela ekujuleni kwemigodi yokuqala yemigodi e-Asturias kwaye, namhlanje, iinqaba zokuxhaphaza ngokwembali ezifana nePumarabule, iMosquitera, iCandín okanye iSolvay, phakathi kwabanye, ukuba namhlanje benza i-minero yaseRuta del Siero, isabonakala ngathi. iingxilimbela zesinyithi. Kodwa eli bhunga - kunye nenkunzi yalo ePola de Siero - ayinayo iNegro de la Hulla kuphela njengeflegi yayo. Iintaba zayo eziluhlaza nezineziqhamo kunye neentlambo zenza ukuba ibe yindawo enkulu yokugcina iinkomo, ubisi, iimveliso zegadi, kunye namabhoma, okwenza iSiero ibe ngumasipala wesithathu e-Asturias onemihlaba emininzi.
I-Jovellanos enemifanekiso, kunye neengcambu zentsapho eValdesoto, yaphefumlelwa nguSiero ukuba aqale uhambo lwakhe lwezimayini; Amawakawaka abahambi ngezonqulo bathatha amanyathelo abo okugqibela eSiero ngaphambi kokuqubuda phambi kweSan Salvador e-Oviedo kunye nenqwaba yeemanors zamaxesha aphakathi ahlanganisene kulo mmandla, ngenxa yendawo ecwangcisiweyo kunye nokubaluleka kwayo kwi-Crown, kwaye nanamhlanje iidyasi zayo zengalo kunye namabhotwe ahlala. , ukuba Yena ukuba umhambi ebabonayo kumsebenzi Route of Rural baKwaZulu ...
Ngokungathi oko akonelanga, kukho iSiero yesiko, iminyhadala, enobuhlobo kunye nokunxibelelana eyonwabela ukubonisa abantu balapha kunye nabangaphandle iminyhadala yabo: I-Comadres ngokuhlwa-ubusuku, imakethi yaseHuevos Pintos, iCarmín Pilgrimage okanye iCarroces de Valdesoto ..., okanye eshukuma rhoqo ngoLwesibini kunye nemarike yayo yeveki kunye nemarike yenkomo yayo, eqhubeka ukuba nguvulindlela kunye nenkokeli eSpain.
Ndifumaneka ngokupheleleyo kwiindwendwe zam ngayo nantoni na eziyifunayo.